मेगा बैंकको एटिएम ह्या’क गरेर पैसा चो’र्न खोजिरहेका एक ब्य’क्ति प’क्रा’उ, को हुन यी बक्ति?:: Mero Desh
मेगा बैंकको एटिएम ह्या’क गरेर पैसा चो’र्न खोजिरहेका एक ब्य’क्ति प’क्रा’उ, को हुन यी बक्ति?
Published on: १८ चैत्र २०७७, बुधबार ११:२०
“काठमाडौं:- दरबारमार्गस्थित मेगा बैंकको एटिएम बु’थ ह्या’क गरि पैसा निकाल्न खोज्ने चिनियाँ नागरिक प’क्रा’उ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी प’रिसर काठमाडौंका अनु सार मंगलबार साँझ २९ वर्षीय चिनियाँ नागरिक वाङ सिआ’ओ’लङलाई प’क्रा’उ गरिएको हो।
“परिसरका अनुसार सिआओलङले ए’टि’एम ह्या’क गरी पैसा नि’काल्न खोजिरहेका थिए। उनी एटिएम मेसिनको कि’बोर्ड पिन नम्बर ह्या’क गरी न’गद नि’काल्न खोजिरहे का थिए।विभिन्न बैंकहरूको ए’टि’एम बुथबाट अस्वाभा -विक रुपमा कुनै व्यक्तिले रकम निकाल्न खोजेको सूचना पाएपछि प्रहरी पुगेको थियो,’
“परिसर प्रमुख एसएसपी अशोक सिं’हले भने, ‘यस क्र’ममा एक जना चि”नियाँ प’क्राउ गरिएको हो।’ विगत केही व’र्षयता चिनियाँ ना’गरिक एटिएम बुथ ह्या’क गरी रकम निकाल्ने कार्यमा सं’लग्न हुँदै आएको तथ्य बाहि -रिएको थियो।
“सिआओलङ ज्याठास्थित होटल मोन्टिसमा बस्ने गर्थे। उनलाई पक्राउ गरी प्रहरी उनी बसिरहेको होटलको ४०५ नम्बर कोठा पुगेको थियो। त्यहाँ पुग्दा प्रहरीले विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरेको एसएसपी सिंहले बताए।
“उनको साथमा १० थान एटिएम, पासपोर्ट, इन्टरनेट कनेक्टर, पेन्राइभ, हिडेन क्यामरा, ड्रिल मेसिन, चाइनिज युएन, अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँ बरामद गरिएको छ। स्रोत कान्तिपुर।
यो पनि,,मान्छेहरुलाई भरैबाट यो छटपटी हुन्छ । निद्रा नलाग्न सक्छ : प्रधानमन्त्री ओली
“काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध का क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको दाबी गरे ।‘
“सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा वृद्ध भत्ता किन बढाइएन, यो किन गरिएन, त्यो किन गरिएन भनेर धुम मच्चाइयो । गत बजेटमै बढायौं । सामाजिक सुर”क्षाका प्रबन्धका क्षेत्रमा हामीले थुप्रो काम गर्‍यौं,’ ओलीले भने, ‘अरु पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरु गर्दै जान्छौं ।
अब पनि साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ नै ।’सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछु भन्दा पनि कसैलाई आपत्ति हुन सक्ने ओलीको भनाइ छ । ‘अब कसैलाई आपत्ति लाग्ला ।
“बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, अपाङ हेर्न थाल्यो । यो सरकार छिटो हटाउनुपर्‍यो । मान्छेहरु”लाई भरैबाट यो छ””टपटी हुन्छ । निद्रा लाग्दैन,’ उनले भने ।सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि आलोचना भएको उनको भनाइ थियो ।
एमसीसी पास गरे बालुवाटार र सिंहदरवार कब्जा गर्ने गर्छौः हेमराज थापा
“जीवन बुढाथोकीको जि’वनमा ब‘ज्रपात! उपचारमा आर्थिक अभाव,(भिडियो) सके सहयोग नसके शे‘यर प्लिज
आजको राशिफल।असोज १ शुक्रबार ।ॐ पाथीभारामाताले कल्यान गरुन्
धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले भ,न्यो: रंगशाला निर्माणबाट हात उठाएका हो,इनौं, सरकारको सह,योग खो,जेका हौं
तेजबहादुरले सापटी दिएको ३५ हजार रुपैयाँको पनि ब्याज लिएकाले आ,क्रोशित थिए लोकबहादुर
“मलेसि’या पठाउने तयारी। यस्ता निय’म पुरा गर्नु पर्छ।